तीन घुम्ती: किन डेभिड क्यामरनले राजनीतिबाट सन्यास लिए ? | सिमान्तMarginal तीन घुम्ती: किन डेभिड क्यामरनले राजनीतिबाट सन्यास लिए ? – सिमान्तMarginal
Posted on 14 Sep 2016 by Jesi for INCOMESCO
सबैलाई अचम्ममा पार्ने गरि वेलायतका निवर्तमान प्रधानमन्त्रि डेभिड क्यामरनले १३ सेप्टेम्बरदेखि तत्काल लागु हुनेगरी सांसदको पदबाट समेत राजिनामा दिए । अब उनि राजनीति सुन्यको अवस्थामा आइपुगेका छन । धेरै शंका उपशंकाहरु चले । हुन त यस अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्रि टोनि ब्लेयरको कार्यकालमा विदेशमन्त्री रहेका डेभिड मिलिब्याण्ड जब आफ्ना भाइ एड मिलिब्याण्डसँग लेवोर पार्टि नेताको पदमा हारेपछि अचानक राजिनामा दिए र पछि ठुलो अमेरिकन च्यारिटि कम्पनीमा जागिर पाएको खबर आयो । स्टक ब्रोकरका छोरा, इटन कलेजबाट दिक्षित पूर्व प्रधानमन्त्रि डेभिड क्यमरनको पनि केहि दाउ त होलान; किन भने उनि भर्खर ५० बर्ष पुग्दैछन ।
यसै बिचमा आज फेरी डेभिड क्यमरनसंग जोडिएर अर्को खबर आयो, त्यो हो उनले लिबियामाथि गरेको कारवाही छलकपटपूर्ण थियो । त्यसमा क्यमरनलाई दोषी ठहर्याइएको छ । यसैगरी इराक र अफगानिस्थानमा गरिएको आक्रमणका लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्रि टोनि ब्लेयरलाइ पनि दोषी ठहर गर्दै ‘चिल्कोट आयोग’ले प्रतिवेदन बुझाएको सर्वविदितै छ। अनि केहि समय अघि अमेरिकी राष्ट्रपति वाराक ओबामाले पनि लिवियाको प्रसङ्गमा डेभिड क्यामरनले परिस्थितिलाई झन तरल बनाएको दावी गरेका थिए ।
त्यतिमात्र होइन आफुले भने जस्तो नभए जनमत संघ्रह मार्फत यूरोपबाट बाहिरिने धम्कि(?) दिंदै हिंडेका डेभिड क्यामरन पछि केहि हाता लागेको भन्दै युरोप मै रहनु पर्ने यू-टर्न लिएर चुनावमा होमिए । आफ्नै साथीहरुले धोका दिए, उनको दलनै यूरोपियन युनियनमा रहने र नरहने भनेर विभाजित भयो । अन्तत: अनपेक्षित परिणाम आयो- जनताले यूरोपियन युनियनबाट बाहिरिन जनादेश दिए । त्यसको लगतै डेभिड क्यामरनले प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिए र उनकै टोरी दलकि टेरेसा मे प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भईन। ब्रेक्जिटको यो पिडा पनि डेभिड क्यामरनमा थियो ।
डेभिड क्यामरनको राजिनामा जागिरको खोजीमा हो वा उनले लिबियामाथि गरेको छल कपटपूर्ण कारवाहीको असर हो वा आफ्ना सहकर्मीहरुबाट पाएको धोकाको अमिलो असर हो यसै भन्न नसकिए पनि उनमाथि एक प्रकारको ‘दवाव’ पर्यो; राजिनामा दिनुलाइ नै उनले आफ्नो हितमा हुने देखे ।
Previous Postब्रेक्जिट : दिनभरको शिकार, कान्छा बाउको अनुहारNext Postतिनको के काम